Trinite-sy-Tôbagô - Wikipedia
I Trinite-sy-Tôbagô na Repoblikan' i Trinite-sy-Tôbagô dia firenena ao Amerika Afovoany, isan' ireo nosy Antilia, manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasina Karaîba sy ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika. Mirefy 5 128 km2 ny velaran-taniny ary niisa 1 208 789 ny mponina tao tamin' ny taona 2020. I Port of Spain no renivohiny. Atao hoe Trinidad and Tobago na Republic of Trinidad and Tobago izy amin' ny teny anglisy.
Sainan' i Trinite-sy-Tôbagô
Sarin-tany maneho an' i Trinite-sy-Tôbagô eo anivon' izao tontolo izao
Tamba-nosy ahitana nosy roa lehibe i Trinite-sy-Tôbagô, dia ny nosy Trinidad sy ny nosy Tobago ary nosy madinika vitsivitsy. Ahitana tandavan-tendrombohitra telo ny ao amin' ny nosy Trinidad. Ao avaratry ny nosy Trinite no misy an' i Tobago.
Kristiana ny ankamaroan' ny mponina ao Trinite-sy-Tôbagô. Ahitana Hindo sy Miozolmana ary mpino amin' ny foivavahana hafa koa ny ao.
Sarin-tanin' i Trinite-sy-Tôbagô
Zanatany britanika taloha i Trinite-sy-Tôbagô izay nahazo ny fahaleovan-tenany tamin' ny taona 1962. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth izy. Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialy ao aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinite-sy-Tôbagô&oldid=1041119"
Dernière modification le 6 Desambra 2021, à 10:07
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 10:07 ity pejy ity.